Banaanbax looga soo horjeeday Maamulka Jubbaland iyo Ciidamada Itoobiya oo ka dhacay Magaalada Garbahaaray – STAR FM SOMALIA
Banaanbax looga soo horjeeday Maamulka Jubbaland iyo Ciidamada Itoobiya oo ka dhacay Magaalada Garbahaaray
Waxaa Magaalada Garbahaarey ee xarunta Gobolka Gedo , ka dhacay banaan bax balaaran oo looga soo horjeeday Maamulka Jubbalad iyo Ciidamada Dowlada Itoobiya ee jooga qeybo kamid ah Gobolka Gedo.
Banaanbaxa ay soo abaabuleen Maamulka Degmada Garbahaarey ayaa waxaa ka qeyb galay shacabka ku dhaqan Magaaladaasi, waxa ayna dibad baxayaasha ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Ciidamada Itoobiya iyo Maamulka Jubbaland.
Shacabka Banaanbaxa dhigayay ayaa sidoo kale kasoo horjeestay maamulka cusub ee Gobolka Gedo uu dhawaan u magacaabay Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe.
Masuul katirsan Maamulka Degmada Garbahaarey ayaa Warbaahinta u sheegay in dibad baxa maanta dhacay looga soo horjeeday Ciidamada Dowlada Itoobiya iyo maamulka cusub ee Sheekh Axmed Madoobe u magaacabay Goboka Gedo.
Banaanbaxa ayaa imaanaya xili Magaalada Muqdisho shalay si qasab ah lagu keenay siyaasiyiin iyo masuuliyiin katirsanaa Maamulka Gedo, kuwaa uu amray in Gobolkaasi laga saaro Hogaamiyaha Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe.